PUTIN: Tallaalkeena “Sputnik V” waxaa loogu kalsoonaan karaa sida AK47 – Calanka.com
PUTIN: Tallaalkeena “Sputnik V” waxaa loogu kalsoonaan karaa sida AK47
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu sheegay in tallaalka coronavirus ee Sputnik, oo lagu sameeyay dalkiisa, uu “la isku halayn karo sida qoriga AK4”.
Faallo taas la mid ah waxaa horay u yidhi dhakhtar Austrian ah.
Qoryaha Kalashnikov ee la soo saaray xilligii Midowgii Soofiyeeti weli adduunka oo dhan ayaa laga isticmaalaa. Maamulka caafimaadka ee Ruushka ayaa shalay si deg deg ah u isticmaalay Sputnik Light, oo ah nooca hal-qaadashada ah ee talaalka Sputnik.
Tallaalkan labada jeer la qaadanayo ah ee Sputnik V, oo Turkigu uu kala xaajoonayo, waa sida nocyada tallaal ee kale sida tallaalka AstraZeneca iyo Janssen. waxaana tallaalkani ayaa qofka ka saacidaya in jidhku sameeyo hab difaac oo isaga u gaar ah, kaas oggolaanaya in jidhku iska caabbiyo weerarrada kaga imaanaya fayraska.
Sputnik V waxaa laga isticmaalaa tobanaan dal oo adduunka ah.
Sputnik Light, oo xogteeda la shaaciyey shalay, ayaa lagu sheegay inuu ku siinayo difaac halkii mar oo ah 79.4 boqolkiiba.”Tallaalka hal-qaadasho ah wuxuu suurtogal ka dhigayaa in dad badan lagu tallaalo waqti gaaban,” ayuu yiri Machadka Gamaleya, oo soo saaray tallaalka.
Dhinaca kale, dalal badan ayaa ka hadlaya joojinta xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee tallaallada la soo saaray.